Kormeere: Qaabkii Isku-dhafka ahaa oo bilaabmaya Isniinta;macluumaad badan oo muhiim ah | Updates
Qoysaska Qaaliga ah ee Iskuulada Nawaaxiga Osseo.
Waxaan idiin ku soo qorayaa inaan idin xusuusiyo in iskuuladeenu (Marka laga reebo Akadeemiyada waxbarshada Durugsan) u wareegi doonaan Qaabka Waxbarshada isku-dhafka maalinta isniinta, September 28ka, ardayda kooxda A waxay iskuulka tegayaan Isniimaha iyo Arbacooyinka, kooxda B waxay iskuulka tegi doonaan Talaadooyinka iyo Khamiisaha. Haddii ilmahaagu xaq u leeyahay gaadiid (bas), waa inaad heshay email iyo warqad boosta kuugu timi oo wadata macluumaadka khadka baska; waxaad kaloo ka heli kartaa macluumaadka gaadiidka ParentVUE. Warkaan ma saamayn doono ardayda ka diiwaangashan Akadeemiyada Waxbarashada Durugsan ee sanadka oo dhan.
Waxaan rabaa inaan sii xoojiyo inaad filataan isbedelo/kala wareegyo badan oo qaababka waxbarashada ah inta lagu jiro sanad-dugsiyeedkan, inta la sugayo dhaqdhaqaaqa fayraska iyo tilmaaha ka imanaya Waaxda Caafimaadka Minnesota, Waaxda Waxbarashada Minneosta, iyo Waaxda Caafimaadka Guud ee Hennepin. Waan garanayaa sida ay isbedeladaasi ugu adag yihiin qoysaskeena, ardayda iyo shaqaalaha isku deyeya qorshaynta xanaanada, jadwalka shaqada, iyo waxyaabo kale. Waxaan si dhab ah u jeclaan lahaa sanad-dugsiyeed “caadi” ah. Si kasta ha ahaatee, waxaan ku jirnaa cudur caalami ah waxaan sii wadi doonaa inaan ku celiyo wixii aan isla wadaagnay xiriiradii hore oo ahaa: Fisha Isbedel. Waxaan u dhexayn doonaa qaababka waxbarashada marba sidii loo baahdo, iyadoo la eegayo dhaqdhaqaaqa fayraska iyo tilmaamaha heer gobol iyo degmo. Isbedeladaan ma saamayn doono ardayda ka diiwaangashan Akadeemiyada Waxbarashada Durugsan ee sanadka oo dhan, kuwaas oo doortay inayna isbedelada qaababku saamayn.
Saddex fariimood oo dheeri ah oo la xiriira COVID:
Degmadeena (iskuuladeena), Waxaan lahayn lahaana doonaa kiisas la helay oo COVID-19 ah oo ay ku jiraan arday iyo shaqaalaba. Maadaama iskuuladu yihiin bulshadii oo kooban, wax lala yaabo maaha in kiisaska laga helay bulshada ay sidoo kale saamayn ku yeeshaan iskuulada. Inta lagu jiro xaaladahaas, waxaan sii wadi doonaa inaan raacno hab maamuuska xiriirka ay samaysay Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH), taas oo macnaheedu yahay inaan la xiriiri dadka loo arko inay isku dhowaayeen (sida ay go’aamisay MDH) waxaan kaloo la xiriiri doonaa kuwa khatartoodu hoosayso, oo micnuhu yahay kuwa dhismaha joogey laakiin aanay u arkin MDH inay wajahayaan khatar ka weyn ta dadka caadiga ah siay fayraska u kala qaadaan (saida MDH u aragto). Fadlan dib u eeg macluumaadkii aanu hore ugu soo dirnay dhammaan qoysaska (Agosto.20), kaas laga heli karo bogga degmada ee website.
Fadlan hubi inaad ku samayso ilmahaaga baaritaan caafimaad maalinkasta oo ay iskuulka tegayaan. Waa muhiim inaad ku samayso baaritaan ilmahaaga ka hor intaadan iskuulka u dirin maalinta uu iskuulka tegayo.
Baaritaan COVID-19 bilaasha ayaa laga helaa Hennepin County (Goobaha bulshadaada) iyo weliba Minnesota Dept. of Health (goobo ku yaal Nawaaxiga metro). Haddaad hayso su’aalo ku saabsan baarista bilaashka ah, fadlan la xiriir Hennepin 612-348-3000 ama Waaxda caafimaadka Minnesota 651-297-1304.
Waad ku mahadsan tahay dulqaadkaaga iyo fahankaaga intaan ka bilownay sanad-dugsiyyed aan caadi ahayn. Waxaan rajeynaynaa inaan aragno ardaydiina laga bilaabo usbuuca dhow, iyadoo loo eegayo Jadwalka A ama B.